78 Qof oo ku dhintay Dab ka kacay Wadanka Bangladesh.
Friday February 22, 2019 - 11:20:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ugu yaraan 78 ruux ayaa ku dhimatay dab xooggan oo ka kacay magaalada Daka ee caasimada wadanka Bangladesh, iyadoona burbur daran uu sababay dabkaasi.
Dabkan oo aanan la ogeyn waxa uu ka bilowday ayaa la sheegay in markii hore uu ka kacay dhisme dabaq ah oo ku yaalla magaalada, islamarkaana uu ku faafay dhismayaasha ku xeeran.
Dhismaha uu dabku ka bilowday ayaa la sheegay in uu ahaa bakhaar lagu keydiyo kiimikada ah sida ay sheegeen saraakiisha Xukuumada waxaana la tilmaamayaa in ay suuragali weysay in la soo bad-baadiyo dad badan oo ku sugnaa halkaasi.
Xaafadda uu dabka ka kacay ayaa ah mid mashquul badan oo leh wadooyin xiriir ah iyo dhismayaal isku dhow-dhow taas oo keentay si degdeg ah uu ku faafo dabka uuna galaafto nolosha dad aad u fara badan.
Qof goob jooge ah ayaa sheegay in la’yahay ugu yaraan 25 ka mid ah saaxiibadiisa iyo walaalkiis oo uu u maleynayo inuu ka mid ahaa dadka ku dhintay dabkaasi.
Qaar ka mid ah dadka dhaawacyada ah ayaa la sheegay in xaaladooda aad looga deyrinayo halka meydadka qaarkoodna la aqoonsan waayey.
Kooxaha dab-damiska ayaa muddo shan saacadood oo xiriir ah la tacaalayay dabka balse waxaa ay caqabad xoogan ka heysatay waddooyinka oo ahaa kuwo ciriir ah iyo dhismayaasha isku raranka ah oo dabku uu si ba’an ugu faafayay.
Sanadkii 2010-kii ayey ahayd markii sidan oo kale ay ugu yaraan 124 ruux ku dhinteen dab xoogan ka kacay degmo lagu magacaabo Nimtali oo ka tirsan wadanka.
Magaalada Dhaka ee caasimada dalka Bangladesh waxay hooy u tahay ku dhawaad 18 milyan oo ruux. 3.5 milyan oo ka mid ah dadkaas waxay ku noolyihiin xaafadaha isku raranka ah sida lagu sheegay warbixin uu dhawaan baahiyey bankiga Aduunka, waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu ciriiriga badan ee caalamka.